Dadweynaha Gaalkacyo oo siyaabo kala duwan uga hadley kala diridii xubnaha… – SBC
Dadweynaha Gaalkacyo oo siyaabo kala duwan uga hadley kala diridii xubnaha…
Posted by editor on April 21, 2011 Comments
Dadweynaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa siyaabo kala duwan uga hadley go’aankii madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole uu xilka kaga xayuubiyey masuuliyiintii dhanka amaanka & maamulka ee gobolka Mudug, taasi oo ka dambeysay wareegto saaka ka soo baxdey xafiiskiisa.
Talaabada Madaxweynaha ayaa ka dambeysay ka dib markii falal dilal ahi ay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo qaarkood masaajidyada la isugu galey, waxaana wareegtada Faroole uu ku sheegay in xubnaha xilka laga qaaday oo kala ahaa Gudoomiyhii Gobolka Mudug, Duqii degmada Gaalkacyo & Taliyihii ciidamada Booliiska Gobolka ay ka dambeysay habacsanaan uu sheegay Madaxweynuhu inay ka timid xubnahaasi.
Nabadoon Yaasiin Cabdisamedoo kamid ah Isimada gobolka Mudug ayaa si rasmi ah sheegay in uu si weyn u soo dhaweynayo talaabada xilka qaadista ee lagu sameeyey xubnahaasi oo uu ku tilmaamay kuwa fashilmay, isagoo xusey in ay mid soo daahdey oo loo baahnaa waqti hore.
Nabadoonka ayaa sidoo kale tibaaxay inay soo dhaweynayaan maamulka cusub ee la soo magacaabay, waxaana uu ugu baaqay dadweynaha magaalada Gaalkacyo inay la shaqeeyaan maamulkan cusub, waxaase uu sheegay in dilalka iyo qaraxyadu aanay aheyn kuwa ku kooban magaalada Gaalkacyo balse ay yihiin kuwa ka jira deegaanada Puntland, waxaana uu sheegay waa sida hadalka nabad doonku u yiri in “Dilalka & falalka amni daradu ay ku jahwareersan tahay xukuumada dhexe”.
Dhinaca kale Wariyaha SBC ee magaalada Gaalkacyo oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo su’aalo ka waydiiyey aragtidooda kua adan maamulkan cusub ee loo magaacabay Gobolka iyo eryida maamulkii hore ayaa badankoodu waxay muujiyeen in loo baahan yahay isbadal la sameeyo oo la xiriira dhanka amaanka & maamulka, iyagoo sheegay in hadii uu jiri lahaa maamul & talis ciidan oo heegan ah inaanay dhici laheyn falalkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah dadka SBC la hadley ayaa sheegay in aanay waxba soo kordhin doonin isbadalka maamul ee uu sameeyey madaxweynaha Puntland, iyagoo taasi ku macneeyey in ay muuqato in la iska indho tirayo wax ka qabashada dadkii dilalka geystay oo magaalada dhinii ay doonaan u soconaya oo aanay qabin wax walwal ah iyo cid la xisaabtamaysa, waxaana dadkaasi ay ku baaqeen in loo baahan yahay in cuqaasha & culumi’udiinka gobolka ay ku xaliyaan arintan sida ay qabto shareecada Islaamka.
Si kastaba ha ahaatee waxaa dadweynaha Gaalkacyo muujinayaan in dawlada dhexe aanay iska saarin xil weyn xaalada amaan ee magaalada Gaalkacyo, iyagoo sheegay in hadii horey deegaanka uga shaqeyn lahaa maamul & kala dambeyn xoogan aanay dhici laheyn falalkaasi foosha xun ee ka dhanka ah shareecda Islaamka oo ah dad lagu dhex dilo masaajiyada.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa saaka wareegto uu soo saarey wuxuu ku kala diray maamulkii & taliskii ciidanka Gobolka Mudug, waxaana uu isla wareegtadaasi ku magacaabay maamul cusub kala ah.
Gudoomiyaha gudiga nabadgalyada Gobolka Mudug Maxamuud C/raxmaan Cuuke oo horey uga mid ahaa masuuliyiinta wasaarada waxbarashada, halka kuxigeenka looga dhigay duq kuxigeenkii degmada Daahir Maxamuud Muuse & Farxaan Cali Xirsi oo ahaa Gudoomiyhii golaha deegaanka degmada Gaalkacyo.